चीन मिनी उत्खनन 1.6Tons - ME16 कारखाना र आपूर्तिकर्ता Bonovo
तपाइँको कामको लागि सहि मिनी खुदाई छनौट गर्नुहोस् उत्पादकता वृद्धि गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। बोनोभोले तपाईको विशेष काम फिट गर्न बिभिन्न मोडलहरू प्रस्ताव गर्न सक्छ, तपाई क्रॉलर वा पा whe्ग्रा खुदाउन खोज्दै हुनुहुन्न, बोनोभोले तपाईंलाई ०.7 देखि .5.। टनको अनुमानित अपरेटिंग वजन दिन सक्छ।
ME16 को विशिष्टता
ट्र्याक गेज ११30० मिमी
समग्र लम्बाई ट्र्याक गर्नुहोस् १5050० मिमी
प्लेटफर्म ग्राउन्ड क्लीयरेंस7437 मिमी
प्लेटफर्म अन्त स्विंग त्रिज्या 740mm
अन्डरकेरेज चौड़ाई १०40० मिमी
ट्र्याक चौडाई २0० मिमी
ट्र्याक उचाई 320mm
यातायात लम्बाई 60१60० मिमी
समग्र उचाई २777777 मिमी
ME16 को समग्र मापदण्डहरु
मेशिन तौल १00०० किलो
बाल्टिन क्षमता ०.454545 मी
वर्किंग उपकरण फाराम ब्याकहो
इन्जिन मोडेल Y्यान33NN70
रेटेड आउटपुट उर्जा / गति १० / २२०० किलोवाट / आर / मिनेट
अधिकतम टोक़ .9१..9 / १00०० एन।एम / आर / मिनेट
गति र उत्खनन बल अधिकतम यात्रा गति K.k किमी / घन्टा
स्विंग गति llrpm
ग्रेड क्षमता °० °
बाल्टिन खन्ने बल १०..5KN
आर्म खुदाई बल .5.। केएन
अधिकतम tractive बल १.5.KKN
भूमि दबाव 35kgf / सेमी 2
सामग्री ट्र्याक गर्नुहोस् रबर ट्र्याक
टेन्शनि device उपकरण प्रकार ग्रीस सिलिन्डर
अधिकतम उत्खनन त्रिज्या 70 3470० मिमी
अधिकतम खुदाई गहिराई २१50० मिमी
अधिकतम उत्खनन उचाइ 3275 मिमी
अधिकतम डम्पिंग उचाई 2310mm
अधिकतम ठाडो उत्खनन गहिराई १4040० मिमी
मिनी स्विंग त्रिज्या १4040० मिमी
अधिकतम डोजर ब्लेड उठाउने उचाई २2२ मिमि
अधिकतम डोजर ब्लेड उठाने गहराई १ 192 २ मिमी
अनुप्रयोगहरू - मिनी उत्खनन परीक्षण अपरेशन
कुराहरु योग्यता र प्रमाणपत्रहरु
कन्टेनर लोड र LCL प्याकेज
मिनी खुदाई वारंटी समय कति छ?
A: एक बर्ष
२. मिनी खुदाई गर्नेको कुन प्रमाणीकरण तपाईंसँग छ?
A: CE, ISO9001, SGS, आदि। यदि तपाईंलाई बिभिन्न देशहरूको लागि अन्य प्रमाणपत्रहरू आवश्यक छ भने, हामी लागू गर्न सहयोग गर्न सक्छौं;
I. के तपाईको कारखानाको भ्रमण गर्न सजिलो छ?
A: कुनै पनि ग्राहकलाई हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न न्यानो स्वागत छ, कृपया तपाईंको शेड्यूल सूचित गर्नुहोस् हामी तपाईंको लागि व्यवस्था गर्नेछौं।
W. निर्माता / कारखानासँग तुलना गरेर हाम्रा फाइदाहरू के हुन्?
- प्रतिस्पर्धी मूल्य - हामी विभिन्न अग्रणी चीन निर्माण मशिनरीको अग्रणी डीलरको रूपमा काम गर्छौं, र हरेक पटक सबै भन्दा राम्रो डीलरशिप मूल्यका साथ व्यवहार गरिन्छ। ग्राहकबाट असंख्य तुलना र प्रतिक्रियाबाट हाम्रो मूल्य अन्य निर्माता / कारखानाहरू भन्दा बढी प्रतिस्पर्धी छ।
- उद्योग अनुभव: हाम्रो उद्योग अनुभव १ 1990 1990 ० को फिर्ता हुन सक्छ र हामी २०० factory मा आफ्नै कारखाना स्थापना गर्छौं।
- द्रुत प्रतिक्रिया - हाम्रो टीम मेहनती र उद्यमी मान्छे को एक समूह बाट बनेको छ, प्रतिक्रिया ग्राहकको सोधपुछ गर्न र २//7 काम गर्ने सबै समयका लागि २ working/7 कार्य गर्दछ। धेरै समस्याहरू १२ घण्टा भित्र समाधान गर्न सकिन्छ।
H. कति समय सम्म हाम्रो मूल्य मान्य हुनेछ?
हामी एक कोमल र मैत्री आपूर्तिकर्ता छौं, हाउफाल मुनाफामा कहिल्यै लोभी हुँदैनौं। साधारणतया, हाम्रो मूल्य वर्षभर स्थिर रहन्छ। हामी केवल दुईवटा स्थितिको आधारमा हाम्रो मूल्य समायोजित गर्दछौं।
१) अमेरिकी डलरको दर: आरएमबी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा विनिमय दरहरूको आधारमा उल्लेखनीय भिन्न छ।
२) उत्पादक / कारखानाले मेशीन मूल्य समायोजित गरे, किनभने बढ्दो श्रम लागत, र कच्चा माल लागतको कारण।
अघिल्लो: मिनी खुदाई १ टन - ME10
अर्को: मिनी खुदाई २ टन्स - ME20
उत्तर: हामी हाम्रा उत्पादनहरू स्थानीय रूपमा निर्माण गर्दछौं। हाम्रो ग्राहक सेवा असाधारण र प्रत्येक ग्राहकको लागि निजीकृत छ। प्रत्येक BONOVO उत्पादन कवचको र एक 12-महिना संरचनात्मक वारंटी संग टिकाऊ हो। हामी चीनमा सब भन्दा राम्रो बाट प्राप्त सस्तो उच्च गुणवत्ताका सामग्री प्रयोग गर्छौं। हाम्रो डिजाइन टीम कुनै पनि अनुकूलन अर्डरहरूको लागि ग्राहकहरूसँग नजिकबाट काम गर्दछ।
केस मिनी उत्खनन
क्याटरपिलर मिनी उत्खनन
जोन डिरे मिनी उत्खननकर्ता
कोमात्सु मिनी उत्खनन बिक्रीको लागि सानो उत्खनन
कुबोटा मिनी उत्खनन बिक्रीको लागि
y्यानर मिनी उत्खनन
BONOVO मध्यम डिगर xcavator पृथ्वी चलिरहेको माच ...